वर्णमाला संसारको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी बन्छ आईफोन समाचार
"एप्पल डूमेड छ।" वर्णमाला यसलाई पार गर्छ र पहिले नै विश्वको सब भन्दा मूल्यवान कम्पनी हो
आज कपर्टिनो कम्पनीलाई घृणा गर्नेहरूका लागि र वर्षौंदेखि कम्पनीको विनाश भएको कुरा गर्नेहरूको लागि ठूलो दिन होः वर्णमाला एप्पल भन्दा माथि छ र यो पहिले नै हो संसारमा सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी। यसको मुख्य कारण यो हो कि टिम कुक र कम्पनीले बाह्र महिनामा उनीहरूको सेयर मूल्य घटेर 775.000,००० मिलियन डलरको मूल्यबाट मात्र "मात्र" जान्छ, उद्धरण हेर्नुहोस्, 540.000०,००० मिलियन डलर।
अर्कोतर्फ, गुगलले अन्तिम वर्ष यसको नाम परिवर्तन गर्‍यो। गुगल ब्रान्ड धेरै कम्पनीहरु मध्ये एक भएको छ जुन वर्णमालाको अंश हो र, त्यस पछि, यसको सेयर बढेको छ र Apple$533.400..532.700 बिलियन डलरको बजार मूल्यमा बढ्दै, अहिले Apple XNUMX२.। बिलियन डलरको एप्पललाई पार गर्दै।
1 वर्णमाला एप्पल ले लिन्छ
2 के एप्पलको गिरावट सुरु भयो?
3 र अब त्यो?
वर्णमाला एप्पल ले लिन्छ
वर्णमालाले के हासिल गर्यो, यसले यसको एक अपमानजनक डोमेनलाई महत्वपूर्ण लाभहरू प्राप्त नगरी गरेको छ: Android। iOS ले एप्पललाई एक तिहाईमा बढी नाफा ल्यायो भन्दा एन्ड्रोइडले आफ्नो सम्पूर्ण ईतिहासमा वर्णमाला ल्याएको थियो। यसको मतलब मेरो हैन कि एप्पलको सम्बन्धमा गुगलको भिन्नता अझ बढी हुन सक्दछ यदि उनीहरूलाई त्यो श्रेष्ठतामा कसरी पूँजीकरण गर्ने भन्ने पनि थाहा थियो।
वर्णमाला एक हो धेरै कम्पनीहरू समावेश कम्पनी एक खोज इन्जिनसँग र सैन्य रोबोटहरूमा लगानीको विज्ञापनको बिक्री पछि, सफ्टवेयरलाई बेवास्ता नगरी जसले तिनीहरूलाई महान बनायो। अर्कोतर्फ, एप्पल एक कम्पनी हो जसले हार्डवेयर र केही सफ्टवेयर बेच्छ। भविष्यमा के हुन सक्छ?
के एप्पलको गिरावट सुरु भयो?
यो धेरैलाई मनपर्दछ। एप्पलको एक प्रयासको लागि केहि समयको लागि आफ्नै स्टक खरीद गरिएको छ कम्पनी मा अधिक नियन्त्रण। झोलामा हुनु सकारात्मक छ, यदि होईन भने तिनीहरू भित्र हुँदैनन्, तर यो केही अलि खतरनाक पनि छ, यी भर्खरका डाटाले देखाएझैं। कुनै समस्याको सामनामा, सेयरहरू खस्न सक्छन्, प्रयोगकर्ताहरू चिन्ता गर्छन् र उनीहरूका उत्पादनहरू खरीद गर्दैनन्, यद्यपि यो सत्य हो जुन विपरित हुन सक्छ।
एप्पल अब एउटा गड्ढा मार्फत जानुहोस्। एक बर्षमा यसको बजार मूल्यको %०% गुमाउनु नै धेरै हो र यस प्रतिस्पर्धामा वर्णमालाले यसलाई जित्नको लागि अनुमति दिएको छ, तर यो त्यस्तो रोग होईन जुन आवश्यक औषधी खाएर ठीक गर्न सकिदैन। निस्सन्देह, सावधानी अपनाउनुपर्दछ ताकि रोग घातक नहोस्।
मलाई लाग्छ केहि पनि परिवर्तन हुँदैन, कम्तिमा छोटो अवधिमा। के भइरहेको छ त्यो हो लगानीकर्ताहरूले एप्पलबाट धेरै आशा गर्छन् क्वार्टर पछि उनको आफ्नै रेकर्ड भ breaking्ग बाहिर। लगानीकर्ताहरू अर्को आइपड चाहन्छन्, उनीहरूलाई अर्को आईफोन चाहिन्छ, उनीहरूले अर्को उपकरण चाहन्छन् जसले उनीहरूलाई उनीहरूको प्रस्तुतिमा ताली बजाउँदछन् भविष्यमा उत्साहित हुँदै हाँस्दै। त्यस्तै हो जुन उनीहरूले देखिरहेका छैनन् र यसैले उनीहरूले एप्पलमा लगानी रोक्दैछन्।
अर्कोतर्फ, यो उत्प्रेरित गर्न छ टिम कुक र कम्पनीमा नवीन रहनको लागि। कम्तिमा पनि यो झोलाको लागि पर्याप्त छैन, स्मार्टफोनमा बजारको पहिलो भरपर्दो फिंगरप्रिन्ट सेन्सर सुरूवात गर्न, न एप्पल वाचको फोर्स टच न त बाह्र महिना पछि त्यसको दोस्रो पुस्ता, थ्रीडी टच। लगानीकर्ताहरू आफ्ना उपकरणहरूमा उनीहरूको पेटन्टहरू हेर्न चाहन्छन्, जस्तै वास्तविक ताररहित चार्जिंग, वा उनीहरूले प्राप्त गरेका केही कम्पनीहरू कसरी प्रयोग गर्छन्, जस्तै लिन्क्स, मोबाइल फोनका लागि सानो क्यामेरामा विशेषज्ञ, वा फेससिफ्ट, विशेषज्ञ कम्पनी। समयमा अनुहारको आन्दोलन स collecting्कलनमा।
पछिल्लो प्रयोगकर्ताहरूको लागि पनि राम्रो छ। जबकि यो सत्य हो कि आईफोन हार्डवेयरले मैदानमा प्रतिस्पर्धा भन्दा बढी शक्तिशाली साबित गर्छ, यो पनि साँचो हो कि यो कहिलेकाँही छोटो हुन्छ। आईफोन s एस क्यामेरा ठीक छ, हो, तर यदि यो लगभग २० मेगापिक्सलको रूपमा राम्रो वा राम्रो भएको भए के हुन्थ्यो? वा के हुन्छ यदि १6जीबी भण्डारण र २ जीबीको सट्टामा उनीहरूले न्यूनतम GB२ जीबी र GB जीबी रम समावेश गर्दछ? तपाईंको उपकरणहरू अझै अधिक टिकाऊ हुनेछ र ग्राहकहरू खुशी हुनेछन्। यदि एक प्रयोगकर्ताले याद गरे कि उनीहरूको आईफोन ढिलो छ, तिनीहरूलाई लाग्छ कि एप्पलले उनीहरूलाई स्क्याम गरेको छ, त्यसैले उनीहरूले भर्खरको मोडेल किन्नेछैनन्। के यो प्रयोगकर्ताको लागि अधिक शक्तिशाली आईफोन हुनु राम्रो हुन्छ जसले तिनीहरूलाई केही वर्षको लागि ताजा राख्न अनुमति दिन्छ iOS को नयाँ संस्करणमा अपडेट गर्दछ? त्यो वर्णमाला एप्पल को पार छ हामीलाई थोरै दिनको लागि उनीहरूलाई बाध्य पार्न सक्छ.
२०१ 2016 को शेष पक्कै पनि चाखलाग्दो हुनेछ। यो के हुन्छ र एप्पलले के गर्दछ भनेर हेर्न रोचक हुनेछ। खराब कुरा यो हो कि उनीहरूले प्रस्तुत गर्नुपर्ने धेरै जसो यस वर्ष उनीहरूले तयारी गरिसकेका हुन्छन्, त्यसैले अर्को चाखलाग्दो वर्ष २०१ 2017 हुनेछ, जब टिम कुक र कम्पनीसँग प्रतिक्रिया गर्न र नयाँ हार्डवेयर सिर्जना गर्न समय आइसकेको थियो जुन यस अवस्था वरिपरि घुम्न सक्छ। । हामी के हुन्छ हेर्नुहोस्। युद्ध समाप्त भएको छैन.
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » "एप्पल डूमेड छ।" वर्णमाला यसलाई पार गर्छ र पहिले नै विश्वको सब भन्दा मूल्यवान कम्पनी हो
hahaha कि सनसनीखेज, बर्बाद? हुनसक्छ यो दोस्रो सबैभन्दा मूल्यवान छ, मलाई थाहा छैन, तर त्यो किन मलाई यो बर्बाद भएको छैन जस्तो लाग्दछ, त्यो वर्णमाला एक कन्सोर्टियम हो जसमा Google भित्र रहेका धेरै कम्पनीहरुसँग हुन्छ, यो ठूलो कम्पनीको कम्पनीसँग मात्र भिन्न छ। १० भन्दा कम उत्पादनहरू र अझै मूल्यवान।
नमस्कार एन्ड्रेस। यही कुरा धेरै एप्पल एप्पल प्रयोगकर्ताहरू र विश्लेषकहरू भन्छन् (विशेष गरी अंग्रेजीमा)। हुनसक्छ मैले यसलाई उद्धरणमा राख्नुपर्दछ, जसको अर्थ उद्धरण हो। अहिले म गर्छु 😉
त्यो, सहि, मैले पनि मेरो फिक्स गर्न आवश्यक छ, यो तपाईं समक्ष गइरहेको थिएन, पोष्टको लागि अभिवादन पनि गर्नुभयो।
आईप्याड एयर and र आईफोन March मार्च १ on मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ
IOS 9.2, 9.2.1 र 9.3 मा जेलब्रेकको प्रदर्शन भिडियो